၁၈နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကောင်လေးရဲ့ အမေဟာ သူ့သား မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းချယ်ခဲ့တဲ့အတွက် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Monday, May 15, 2017 Design & Lifestyle
Jauan Durbin လို့ခေါ်တဲ့ ၁၈နှစ်အရွယ် Morehouse College ကကျောင်းသားသစ် ကောင်လေးဟာ သူ့မိတ်ကပ်တွေဘယ်လိုပြန်ဖျတ်ရမလဲ သိခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့အမေဟာ သူ့ရဲ့အစစ် အမှန်ပုံစံချပြဖို့ ဆုံးဖျတ်လိုက်တာကို လက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ သူပြန် မဖျတ်တော့ပါဘူး။ သူမိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အတွက် ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ သူ့အမေရဲ့ ပြောစကားတွေကို Screen shot ရိုက်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
သူ့အမေသူ့ကိုပြောထားတဲ့ စကားတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ Screenshot နဲ့ သူ့ရဲ့ Tweet
မင်းယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီမျက်တောင်မွှေးတွေတပ်၊ မျက်ခုံးမွှေးတွေဆိုးပြီး မိတ်ကပ်တွေလိမ်းတာ ဘာလုပ်မလို့လဲ။ ငါဘာမှမပြောတော့ဘူး၊ တော်ပြီ။
ဟားဟား၊ ဒါတော်တော်နာကျင်တာပဲ၊ တစ်ကယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ငါသေတဲ့အထိ ငါ့အမှန်တရားနဲ့ နေထိုင်သွားမှာပါ။
Jauan ဟာ Twitter ပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့တယ်။ “ကိုယ်လူတို့ ငါငိုချင်တယ်ကွာ၊ ငါ့ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှ မလုပ်ပဲ လမ်းပေါ်မှာပဲနေခဲ့လို့ ငါ့ အမေစိတ်မပျက်ခဲ့ဘူး၊ ငါမိတ်ကပ်လိမ်းတော့မှပဲ စိတ်ပျက်တယ်တဲ့။ ငါကောလိပ်တက်နေပြီလေ။ ကျောင်းသားရေးရာနဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါ အတွက်ရယ် ငါတို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ငါလုပ်ဆောင်နေပြီလေ။ သူမက ငါမိတ်ကပ်လိမ်းလို့ဆိုပြီး စိတ်ပျက်တယ်၊ မိတ်ကပ်ဆိုတာ မိန်းမတွေ အတွက်ပဲ တဲ့လေ။ ငါတော်တော်နေလို့မကောင်းဘူးကွာ။ တစ်ခါမှဒီလောက်မခံစားဖူးဘူး”
သူ့ ပထမဆုံး Tweet ဟာ ပြန့်နှံ့ သွားခဲ့ပြီး အခြေအနေတူတဲ့လူတွေဆီကနေ တူညီတဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေ၊ ထွေးဖတ်မှုအတုတွေ (Online Stickers များဖြစ်နိုင်)၊ ထောက်ခံမှုတွေ အသွင်နဲ့ အထောက်အပံ့တွေရခဲ့ပါတယ်။
MAC အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကတောင် သူ့ဘက်ကပါခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ Brand ကနေသူ့ကို Eye-shadow တွေ Eyeliner တွေ Brush တွေနဲ့ တစ်ခြားအရာတွေအများကြီးပါတဲ့ အထုတ်တစ်ခုပို့လိုက်ပါတယ်။
Thank you so much, @MACcosmetics! I look forward to working with you all! pic.twitter.com/ZhuDR9LQsx
— Royalty (@PrinceJauan) April 28, 2017
So grateful! Thank you so much! @MACcosmetics pic.twitter.com/WG9LfXbn9Q
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ သူအမေဟာလည်း စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ “ကျွန်တော်အမေဟာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာအားလုံးကို မြင်ပြီး ကျွန်တော်နာကျင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ နားလည်သွားပြီ။ သူမက ကျွန်တော့်ကို လက်ခံသွားပြီး သူဒီလိုတွေပြောဆိုရတာကလည်း ကျွန်တော်ဒီိလို မိတ်ကပ်တွေလိမ်းတဲ့အပေါ် သူများတွေဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတဲ့ အပေါ် သောကများခဲ့လို့ပါ”
သူမလက်ခံမှုက အတော်တော့ အရေးကြီးတယ်။ ဘာလို့ဆို သူ့အမေကပဲသူ့ကို လောကမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နေထိုင်ဖို့က အဓိကပဲလို့ပြောခဲ့လို့ပါပဲ။ “ ကျွန်တော်အမဆီကနေရခဲ့တဲ့ သတ္တိဟာဆိုရင်ဖြင့် ဘယ်သူ့မှမထောက်ခံရင်တောင်မှ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာပါပဲ”
ကဲ Jauan ကို သူ့အလှတရားကို လက်ခံပေးဖို့အတွက် အချိန်ခဏလောက်ပေးရအောင်။ အပြင်ပန်းအလှရော အတွင်းပိုင်းစိတ်အလှကိုရောပေါ့။
Source | Seventeen